WatchOS 5 Beta 6.2.5 yeVagadziri | Ndinobva mac
WatchOS 5 beta 6.2.5 yevagadziri
Apple yakaburitsa maawa mashoma apfuura iyo nyowani beta vhezheni ye watchOS 6.2.5 yevagadziri uye mune iyi vhezheni nyowani yakaburitswa yega tinowana yakajairika mashandiro uye kugadzikana kugadzirisa, paine shanduko shoma maererano nemabasa achienzaniswa neshanduro yapfuura. Apple ingadai yakamirira kuti iite shanduko yakakosha muwatchOS 7 uye iyi vhezheni ichasvika mushure megore rino WWDC, iyo inofanirwa kucherechedzwa ichave yekutanga kuitiswa zvizere pamhepo nekuda kwedambudziko rekona.
Iyi vhezheni yakaburitswa nguva pfupi yapfuura mabetas emamwe mashandiro eApple zvishandiso uye vhiki mushure meiyo beta 4 vhezheni iyo isina kuunza nhau futi. Nguva dzese isu patinenge tichiswedera padyo nepedyo kune yekupedzisira vhezheni uye kunyanya kune nhau dze system vhezheni 7 Izvo zvinogona kuve zvakanyanya sezvatinoona mune runyerekupe.
Kana iwe uri mugadziri, iwe unotoziva kare kuti une mukana wekugadzirisa izvo zvinoshandiswa zvaunoda kuita kune nhau dzeiyi beta, iyo kunyangwe sezvatakataura, pakutanga tarisa pane kugadzirisa zvipembenene uye mukuvandudza kwakaunzwa zvishoma nezvishoma, beta mushure me beta. Nenzira, yeuka zvakare kuti idzi beta shanduro dzevagadziri veApple smart wachi haibvumire "kudzikisira" kana paine matambudziko nechishandiso, saka zvakakosha kuisa mabheta padivi uye kuti ivo chete vavaki ongorora mashandiro uye zvichingodaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchOS 5 beta 6.2.5 yevagadziri
Gadziridza Adobe Acrobat Reader kudzivirira zvikanganiso zvekuchengetedza
Iyo Apple Magirazi anokwanisa kusvika kubva muna 2022